दसैँको पूर्वसन्ध्यामा विकृतिका छायाहरु | चितवन पोष्ट
गृह » दसैँको पूर्वसन्ध्यामा विकृतिका छायाहरु
सरकारले दसैँ आउन केही समय बाँकी रहँदा आफूनिकट विभिन्न दलका पहुँच भएका हजारौँ कार्यकर्तालाई झन्डै रू. २० करोड आर्थिक सहायताको रुपमा कनिकासरह बाँडेर राष्ट्रिय ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाएको मह¤वपूर्ण तर नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न एक राष्ट्रिय दैनिक सफल भएको छ । त्यसको ठीकविपरीत सत्य, निष्ठा र आदर्शका प्रतीक बनेका सामाजिक अभियन्ता एवम् प्रा.डा. गोविन्द केसीले सोमबारदेखि चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त माफियातन्त्रको अन्त्य गर्न माग गर्दै १२ औँ पटक आमरण अनशनमा बसेको खबरले पनि प्रथम पृष्ठमा मर्यादित स्थान प्राप्त गरेको छ । दसैँको सेरोफेरोमा सबै नेपाली खुसी, शान्त रहून् र विश्व मानवताले थप उचाइ प्राप्त गरोस् भन्ने हाम्रो चाहनाले पनि तत्काल सार्थक परिणाम दिने सम्भावना न्यून देखिएको छ । विजयादशमीको पूर्वसन्ध्यामा आज फूलपातीको दिन दुर्गा भवानीले थप शक्ति र ऊर्जा प्रदान गरुन् भन्ने हाम्रो कामना रहेको छ । विकृतिहरुको अन्त्य गर्न नवदुर्गाको अदम्य शक्ति सफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सामाजिक मूल्य र मान्यताहरु क्रमशः क्षयीकरण हुँदै गएको र देशको आर्थिक समृद्धि हुन नसकेको यो तीतो वर्तमानलाई पिएरै भए पनि हामी विजयादशमीलाई शक्तिरुपा भवानीको आशीर्वादसहित रमाइलो मानेर दसैँ मनाउने क्रममा मानसिक रुपमा तयार भइसकेका छौँ । धर्म र संस्कृतिप्रति विशेष आस्था प्रकट गर्ने नेपाली समाजको मनोविज्ञानले दुःख र पीडाहरुलाई बिर्सिएर भए पनि रमाइलोसँग दसैँ मनाउने गरेका छौँ । देश–विदेशमा रहेका आफन्तजनहरुको आगमन सुरू भइसकेको कारण घरघरमा दसैँको रौनक छाएको पाइन्छ । तर, दुई छाक पेटभरि चामलको भात खान नपाउने वर्गका लागि भने यो दसैँ दशाजस्तै भएको छ ।
यसैबीच, नेपाल चिकित्सक संघको आह्वान्मा व्याप्त देशव्यापी आमहड्ताल अझै समाप्त भएको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर देशभरिका बिरामीहरुलाई परेको छ भने उनीहरुको दसैँ पनि यसपालि खल्लो हुने स्थिति देखा परेको छ । भरतपुरका सरकारी र निजी अस्पतालहरुमा देखिएको बिरामीहरुको भीडले अवश्य पनि यहाँका चिकित्सकहरुको मन पगालेर उपचारतर्फ उन्मुख हुने अपेक्षा गरिएको छ । जब देशभरिका चिकित्सकहरु नै आमहड्तालमा उत्रिन्छन् भने त्यहाँको सरकारले अवश्य पनि लज्जित हुनुपर्दछ । सामाजिक जीवनमा मर्यादित र प्रतिष्ठित पेसाका रुपमा रहेका चिकित्सकहरु यसरी झन्डै हप्तादिनदेखि आमहड्ताल गरिरहँदा हजारौँ बिरामी र उनका आश्रित परिवारहरुका लागि यो दसैँ अवश्य पनि नरमाइलो हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारसँग वार्ता पनि गर्दै रहेको नेपाल चिकित्सक संघले नेपालीहरुको महान् चाड दसैँसमेतलाई दृष्टिगत गरेर यो आमहड्ताल अन्त्य गर्न हामी आग्रह गर्दछौँ ।